Sajhasabal.com |रारा तालबाट प्रधानमन्त्रीको भावुक सम्वोधन (भिडियो / पूर्णपाठ सहित)
वैशाख १, मुगु | रारा तालबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीलाई सम्वोधन गरेका छन् । आज नयाँ वर्षको समेत अवसर पार्दै ओलीले गरेको १८ पन्नाको सम्वोधनमा ३१ बुँदा छन् ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको भाषणको सम्वोधन पूर्णपाठ र भिडियो हेर्नुहोस्
नयाँ वर्ष २०७५ को शुभारम्भमा म यहाँहरु सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
आर्थिक रुपमा परनिर्भर हुनु पर्दा कसरी राष्ट्रिय स्वाभीमानमा आँच पुग्दो रहेछ र राष्ट्रियता नै जोखिममा पर्दो रहेछ भन्ने पाठ इतिहासले हामीलाई कहिल्यै नबिर्सने सिकाएको छ । त्यसैले योजनावद्ध आर्थिक विकास, पारस्परिक अन्तरनिर्भरता र व्यापारको विविधीकरण मार्फत् मुलुकलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउन सरकार केन्द्रित हुने छ । सामन्ती शोषणका सबै अवशेषको अन्त्य, उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवं उत्पादनमा वृद्धि, सामाजिक न्याय एवं न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवं परनिर्भरताको अन्त्य र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्तिका नीतिले हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने छन्। सारमा, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता,शान्ति तथा स्थायित्व, र विकास तथा समृद्धिलाई हामीले आफ्नो कामको पाँच आधारका रुपमा अपनाउनुपर्छ ।
दुई तिहाइ जनताको जीवन ज्युँने आधारको रुपमा रहेको कृषि अझै पनि निर्वाहमुखी, अव्यवसायिक, परम्परागत तथा अनुत्पादक रहनुलाई मैले ठूलो चुनौतीका रुपमा लिएको छु। यसै त टुक्रिएको जमिन, आधुनिकीकरण एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको बृद्धिमा समस्याको रुपमा छँदैछ, त्यसमाथि बजार प्रबन्धमा समस्या, उर्बर जमिनको अतिक्रमण र जलवायु परिवर्तन आदिका प्रभावले कृषि क्षेत्रको संकट बढाइदिएको छ । कृषि प्रधान देशबाट, कृषि सवल देशमा परिवर्तन गर्ने, कृषिमा निर्भर दुई तिहाइ जनसंख्यालाई पाँच बर्षभित्र २५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने, कृषि उत्पादकत्व ५ वर्ष भित्र ४ गुण बृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रहेको कृषिको हालको योगदान एक तिहाईबाट झारेर २० देखि २५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने गरी हाम्रा कामहरु अघि बढाइनेछ ।
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै कृषिलाई सम्मानित पेशा र किसानहरुलाई सम्मानित नागरिकका रुपमा अगाडि बढाउने कार्यक्रमहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विस्तृत रुपमा चर्चा गरिनेछ ।
आज हामी कर्णाली प्रदेशको लागि पर्यटन वर्षको शुभारम्भ केही समय पछि नै गर्दै छौं । पर्यटन उद्योग एउटा प्रदेशको मात्र नभई हाम्रो विकास र समृद्धिको मुख्य आधार पनि हो । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार निर्माण, नेपालका पर्यटकीय सम्पदा र गन्तव्यहरुको प्रचार–प्रसार, बजार प्रवद्र्धन र पर्यटकीय सम्पदाको संरक्षण र सौन्दर्यमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।
शिक्षालाई मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग आवद्ध गर्दै यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न तथा युवाहरुलाई आत्मनिर्भर तथा प्रतिष्पर्धी क्षमता युक्त बनाउन पुनर्संरचना गरिने छ । मैले पद बहाल गरेकै क्षण सबैपालिका तहमा एक÷एक वटा प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छु । हाम्रो शिक्षालाई काम र रोजगारीसँग आवद्ध गर्न प्राविधिक र साधारण शिक्षामा सत्तरी–तीस’को अनुपातमा व्यवस्थित गर्ने नीति हामीले लिनेछौं । जतिवेला बाँकी दुनियाँ अन्धकारमा थियो, अक्षर हुन्छ भन्ने जान्दैन थियो, त्यतिबेला पनि हाम्रा पुर्खा जीवजन्तु, वनस्पती, प्रकृति, भुगोल र खगोलको अध्ययन गर्थे । कला, संस्कृति र साहित्यको सिर्जना गर्थे । ज्ञानको उत्पादन संग्रह र विस्तार गर्थे । ती ज्ञानी, ती ध्यानी, ती विद्वान ऋषि र मुनिका सन्तान आज निरक्षर र अनपढ हुने, स्कूल जान नपाउने? विद्यालय भन्ने शव्द, भाव र व्यवहारको सिर्जना जहाँ भयो, तिनका सन्तान विद्यालयमा जान नपाउने? अब यो चल्न सक्दैन । म कवि महानन्द सापकोटालाई स्मरण गर्छु– “विधिकोयदी त्यही विधान छ भने अब त्योविधिकोपनि आयूपुग्यो१ू पुनः एकपटक जोड दिन चाहन्छु– अब हाम्रा बालबालिका स्कूल जान्छन् । ऋृषि मुनीका सन्तान अब स्कूल जान्छन्, जान्छन् | अबदेखि कुनैपनि बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहनेर आर्थिक अभावका कारण बीचैमा पढाइ छाड्नुपर्ने वाध्यताकोअन्त्य हुन्छ । शिक्षालाई प्रतिष्पर्धी, गुणस्तरीय र जीवनपयोगी एवं समाज उपयोगी बनाइने छ । यस्तोशिक्षा प्राप्त गर्ने व्यक्तिका लागि आफ्नोजीवन सहज र सरल हुने अवस्था सिर्जना गरिनेछ । त्यस्तो व्यक्ति समाजका लागि गुणवान र उपयोगी हुनेछ । त्यसैले त्यस्तो शिक्षा सुलभ र सबैको पहुँच भित्र हुनुपर्छ । शिक्षा, विकासको लागि हो, विकासको लागि कस्ता र कति जनशक्ति चाहिने हो, त्यसको योजनावद्ध मानव श्रोतको प्रवन्ध व्यवस्थित रुपमा गरिनेछ ।
समयले देशको विकासको लागि माग गरेको जनशक्ति उपलव्ध गराउनु शिक्षाको उद्देश्य हो । निकट भविष्यमा शिक्षासम्बन्धी विस्तृत विवरण र कार्यक्रम तयार गरी सोही बमोजिमको शिक्षा नीति लागू गरिनेछ ।
प्रदुषण र दुषित खाद्यका कारण अहिले संक्रामक सरुवा रोगबाट मात्रै हैन, नसर्ने रोगको महामारीबाट समेत हाम्रा जनता पीडित छन् । उनीहरुको स्वास्थ्यका बारेमा चासो राख्नु राज्यको दायित्व हो । स्वास्थ्य भनेकोअस्पताल र ट्याव्लेट मात्रै हैन, स्वच्छ हावापानी, स्वच्छ वाताबरण, स्वच्छ खानपान, उचित आनिवानी र दिनचर्या पनि हो । एकचोटी सोचौं– हिऊँ पग्लिएर हामी कहाँ ओखतीको जरा पखाल्दै पानी बग्छ । औषधि पखाल्दै पखाल्दै बगेको पानी खनिजसँग मिसिंदै मिनरल पानी हुँदै आउँछ । हाम्रो हावा र पानी यसरी औषधीय छन । जहाँको खानेकुरा स्वस्थकर र पवित्र छ, प्रदुषित छैन, त्यहाँका मानिस आज रोगी ? जुन देशमा जडिबुटी छ, ढुंगा सिलाजित हुन्छ, माटो सिम्रिक हुन्छ, जुन देशमा उम्रिने झार यार्सागुम्बा, पाँच औंले, संजिवनी हुन्छ, त्यस देशमा औषधीको अभावमा मान्छे मर्ने? योकसरी हुन्छ ? अव यो स्थितिको अन्त्य गर्नै पर्छ । तसर्थ, स्वास्थ्यको सन्दर्भमा नेपाललाई केही बर्षभित्र अर्गानिक नेपाल बनाइने छ । नेपालको हावा–सहि अर्थमा प्राण वायू नेपालको पानी–जीवन जल । हाम्रो नीति उपचार केन्द्रीत हैन– आरोग्यता केन्द्रीत ! मौलिक अधिकारका रुपमा प्रत्याभूत आधारभूत स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गरिने छ । स्थानीय सरकार र समुदायसँग मिलेर प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तिमा यो अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन गरिने छ । सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ । गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनता, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउनेमाध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिनेछ । २७. भूकम्पपीडित, बाढी र पहिरो प्रभावित तथा घरबारविहीनहरुको पीडाका बारेमा म जानकार छु । तसर्थ, उनीहरुको आवासको हक सुनिश्चित गर्दै क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ ।
कर्णाली प्रदेशको यो सुन्दर स्थानबाट संबोधन गरिरहँदा प्रथा र प्रचलनका नाममा हुनेगरेका महिलाविरुद्धका केही घटनाहरु स्मरण गरिरहेकोछु। जेसुकै तर्क वा कारणबाट होस्, अब महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसा र विभेद प्रभावकारी ढंगले अन्त्य गरिनेछ । बालविवाह, बहुविवाहलाई पूर्णतः निषेध गरिनेछ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत पूर्ण रुपमा उन्मूलन गरिनेछ । कर्णाली लगायतका दुर्गम प्रदेशका जनतालाई विकासको औसत राष्ट्रिय स्तरसम्म पु¥याउन राज्यबाट विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ । तराई–मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अविकासको समस्यालाई सम्बोधन गरिनेछ।
हामीलाई थाहा छ– समाजमा दृष्टान्त कायम गर्ने माथिबाटै हो । नैतिक स्वच्छता कायम गर्न सरकारले आफैबाट सुरु गर्ने छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले यसको अगुवाइ गर्ने छु । म मेरा सबै मन्त्रीहरु, सांसदहरु र राष्ट्रसेवकहरुलाई आह्वान गर्छु– हामीले प्रकृतिकोसुन्दर वरदानका रुपमा यो जीवन प्राप्त गरेका छौं । संयोगवश नेपालमा जन्मिन पाएका छौं र यसको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको नेतृत्वदायी स्थानमा आइपुग्न पाएका छौं । विरलै मान्छेलाई प्राप्त हुने यो अवसरको अधिकतम सदुपयोग गरौं । कुनै महत्वपूर्ण नीति तर्जुमा गरिरहेको बेला या कुनैनिर्णय गर्न लागिरहेको बेला हामीले गाउँमा तर्तरी पसिना बगाइरहेका जनताको पीडालाई हेक्का राखौं, विदेशमा कष्टसाध्य परिश्रम गरिरहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको आँखामा झल्किरहेका आशालाई याद गरौं– गलत निर्णय गर्न हात काँप्नेछन्। क्षणिक स्वार्थका लागि गरिने भ्रष्टाचार र अनियमितापछि खेप्नुपर्ने कानुनी र नैतिक दण्डका तुलनामा त्यसबाट आर्जित सुखसुविधाहरु क्षणिक हुन्छन् भन्ने कुरालाई सधैभरि मनन गरौं ।
अनेकौं आरोह अवरोह, सफलता विफलता र एकता–विभाजनका शृब्खला पार गर्दै नेपाली राजनीति आज यस महत्वपूर्ण बिन्दुमा आइपुगेको छ । सामन्ती राज्यप्रणाली, निरंकुश शासन व्यवस्था, द्वन्द्व, अस्थिरता, संक्रमणकाल र भ्रष्टाचार लगायत अनेकौकारक तत्वहरुले गर्दा मुलुकले आजसम्म विभिन्न पीडा भोग्न वाध्य भयो । अब इतिहासको पाना बदल्ने बेला भएको छ । संयोगवश, नयाँ इतिहास निर्माणको यस ऐतिहासिक बिन्दुको नेतृत्व गर्ने अवसर तपाइँहरुको अपार माया पाएर व्यक्तिगत रुपमा म, हाम्रो सरकार र वामपन्थी गठबन्धनलाई प्राप्त भएको छ । तीव्र रुपमा परिवर्तन भइरहेको विश्व, हाम्रै भूराजनीति र समग्र परिवेशले हामीलाई स्थायित्व र समृद्धिका दिशामा बेगका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गरिरहेका छन्।
निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा लोकतान्त्रिक प्रणालीको अपरिहार्य विशेषता हो । यस्तो प्रतिष्पर्धा राज्यसञ्चालनका लागि जनताबाट वैध आदेश प्राप्त गर्नका लागि हो । एकचोटी त्यस्तो जनादेश प्राप्त भएसँगै निर्वाचनकालीन प्रतिष्पर्धाको ठाउँ निर्माणमा सहकार्यलेलिन्छ, लिनुपर्छ । निर्वाचनमा प्राप्त बहुमत दम्भ र वर्चस्वका लागि होइन । त्यसरी नै, प्रतिपक्षीकोस्थान पनि अन्त्यहीन विरोध, असहयोग या कटुताका लागि होइन । म विनम्रताका साथ मुलुकमा क्रियाशील सबैराजनीतिक दलहरुलाई लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, राष्ट्रिय हित र समृद्धिका वृहत्तर विषयहरुमा समझदारीका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछु।
म तपाइहरुलाई आत्मविश्वासका साथ भन्न चाहन्छु– पाँच बर्षपछि नयाँ निर्वाचनमा तपाइँहरुका अगाडि आइपुग्दा हाम्रा काम र उपलव्धिहरुले तपाइँहरुलाई आफ्नो अमूल्य मत सही ठाउँमा परेको रहेछ भन्ने विश्वास दिलाउनेछन्। पाँच बर्षभित्रैमा देशकोमुहार स्पष्ट अनुभूत हुनेगरी बदलिने छ, सकारात्मक दिशामा । यसमा आश्वस्त हुन र नयाँ सरकारका काममा आवश्यक सुझाव, चासोर सहयोग पु¥याउनुहुन अनुरोध गर्दछु। हामी सबै एकतावद्ध भई नेपाललाई विकासको मार्गमा द्रुत गतिले अगाडि बढाउन सकौं, यही चाहना सहित आजैबाट प्रारम्भ भएकोवि.सं. २०७५ साल स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरुका लागि सुस्वास्थ र सफलताको बर्ष हुन सकोस्, मेरो हार्दिक शुभकामना !